Dad Badan Oo Gaari Lagu Jiirsiiyay Munaasabad ka Socotay Mareykanka.(Sawiro) AwdalMedia Awdalmedia Dad Badan Oo Gaari Lagu Jiirsiiyay Munaasabad ka Socotay Mareykanka.(Sawiro)
Dad Badan Oo Gaari Lagu Jiirsiiyay Munaasabad ka Socotay Mareykanka.(Sawiro)
Gaari si xowli ah ku socday ayaa si ula kac ah u jiiray dad badan oo ka qeyb qaadanayay munaasabad diimeed ay dhigayeen dad Kirishtaan ah taa oo ka socotay fagaare kuyaala gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka.
Inta la xaqiijiyay shan qof ayaa ku dhimatay weerarkan gaari jiirsiinta ah loo adeegsaday, waxaa sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaareen dad gaaraya 40-qof ay ku jiraan 12-caruur ah.
Muuqaal lagu baahiyay baraha bulshada ayaa laga dhax arkayay gaari midibkiisu gaduud yahay oo dhax socda si caadi ahna u jiiraya dadka ka qeyb galayay munaasabada ama xuska ay dhiganayeen masiixiyiinta.
Taliyaha booliiska Dan Thompson ayaa sheegay in weerarkan gaariga loo adeegsaday dad badan ku dhinteen kuwana ku dhaawacmeen, waxa uuna sheegay in ay socdaan baaritaano kiiskan ku aadan.
Booliiska ayaa sheegay in dhacdadan ula muuqan mid argagaxiso, waxaana hada socda baaritaano ku aadan waxa keenay gaariga dadka la jiirsiiyay ee dhaliyay khasaaraha badan ee dhimasho iyo midka dhaawac.
Somaliya Iyo Faransiiska Oo ka Wada-hadlay Iskaashiga Amniga Iyo Ganacsiga
Somalida Islii Oo ka Horyimid Hadal kasoo Yeeray Senator ka Tirsan Aqalka Sare Kenya.